Archive du 20161126
Marc Ravalomanana Mbola tompon'ny serasera
Nitsidika teny amin�ny amin�ny �Parc des expositions� Forello Tanjombato, toerana hanatanterahana ny hetsika ara-toekarena �Salon de l�Industrie de Madagascar� na SIM andiany faha-3 ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana omaly.
Tolon�ny fanorenana ifotony (TFI) Niala maina indray ny mpitarika
Tsy hay na tahotry ny korontana na ny fanentanana no tsy nahomby fa tsy nisy namaly ny antso sy famoriam-bahoaka nataon�ny Tolona ho Fanorenana Ifotony (TFI) tarihin-dry Joseph Yolande, R�n� Rasolofo, Solonavalona �
Mpitaky ny nosy manodidina Mitaky ny fiandrianam-pirenena
Tsy azo hifampiraharahana na amin�iza na amin�iza ny fiandrianam-pirenena, hoy ny avy eo anivon�ilay fikambanana nosy Malagasy na ANM, raha nandefa taratasy misokatra ho an�ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampiana omaly.
Solombavambahoaka Hanala azy eny amin'ny By Pass
Vita iny ny fandaniana ilay tetibolam-panjakana 2017 teny anivon�ny antenimieram-pirenena eny Tsimbazaza.
Fifidianana tany Etazonia Mety haverina ny fanisam-bato
Toy ny nitranga tamin�ny taona 2000 teo amin�ny fifidianana ho filoham-pirenena nifanandrinan�i Al Gore sy George Bush zanany dia ahiana ihany koa izao ny hamerenana ny fanisam-bato azon�ireo mpifaninana tamin�ny fifidianana filoham-pirenena amerikanina farany teo.
Fivorian�ny Frankofonia Efa tonga tsikelikely ireo filoham-pirenena
Anio sabotsy no ho tonga ny filoha Frantsay Fran�ois Hollande. Efa nisy kosa ireo filoham-pirenena sy praiminisitra tonga ny alakamisy sy omaly zoma. Anisan�izany ny filoha Vietnamiana Tran dai quang,
Lafo tanteraka e !
Tena lafo r�ise isika a ! Lafo ny harena sy ny tanintsika ary mbola tadiavinareo hamidy ihany koa ny tenintsika !
Tolo-tanana ho an-dRandrenja Eny amin'ny Coliseunm amin'ny 4 desambra
Efa manomboka mihatsara ny fahasalaman-dRazafindrakoto G�rard na Randrenja amin�izao fotoana izao fa tsy araka ny feo nandeha teo aloha.
Mpianatra malagasy mankany Quebec Nitombo 12 isan-taona
Niampy 12 isa isan-taona indray raha folo teo aloha ireo mpianatra Malagasy hiantohan�ny firenena Quebecoise saram-pianarana maimaimpoana, handranto fianarana any amin�ny �Universit� du Qu�bec � Trois � Rivi�res�.
Orinasa Star Miara-miasa amina tantsaha 20 000
Handray anjara amin�ny fampandrosoana ny toekarem-pirenena ny vondrona Star. Anisan�ny antony nanosika azy ireo hanohana amim-pomba ofisialy ilay hetsika � Salon de l�Industrie de Madagascar � 2016 hifarana rahampitso eny Tanjombato izay hahafahana mampiroborobo ny orinasa Malagasy rehetra.
Tsy fantatra ny tanjona amin�izao fihetsiketseha mitranga amin�izao fihaonamben�ny frankofonia izao.